40 wax soo saar oo sifiican u shaqeynaya, waxay leeyihiin tan oo ah 5-xiddig oo dib u eegis ah | Goobta Med
40 wax soo saar oo sifiican u shaqeynaya, waxay leeyihiin tan oo ah 5-xiddig oo dib u eegis ah
Waqtiga intiisa badan, waxaad ku iibsataa shey qadka waxna kama fileyso wax badan, marka laga reebo inaad ku guuleysato howlaheeda loogu talagalay. Laakiin mar kasta oo in muddo ahba, wax ayaa ka muuqda albaabkaaga albaabka ka sarreeya oo dhaafsiisan, sida tan oo kale ah 40kan alaab ee aadka loo eegay oo caado ahaan ka sarreeya filashooyinka.
Fursado ayaa ah, waad aragtay in yar oo ka mid ah alaabooyinkan oo ka muuqda liisaska kale ee ugu fiican ee internetka, waana sababtaas sababta oo ah waxay runtii mudan yihiin booskooda. Arin muhiim ah: aflaantaan la qaadi karo ee Bluetooth-ka ah ee ay kuxirantahay 25,000 oo ah shanta xiddig ee Amazon-ka ah. Kaliya maahan inuu bixiyo dhawaaq cajiib leh, oo leh buuq buuxa, laakiin wuxuu sidoo kale bixiyaa muddo dheer 12 saacadood oo dheeri ah waqtiga ciyaarta. Tan iyo markii ay biyuhu u adkeysan karaan biyaha, waa ikhtiyaar aad u wanaagsan haddii aad maalinta aad ku qarashgareyneyso harada ama aad ku sudhan tahay barkad. Waxaad sidoo kale halkan ka heli doontaa waxoogaa cusub, inkasta oo, sida saliida magnesium la mariyo oo kaa caawinaysa murqaha murqaha ka dib markay hawadu kacdo (ama saacado kooban oo aad ku isticmaasho wicitaan shaqo oo kacsan) ama xirmo badan oo xariif ah oo kuu oggolaanaya inaad ka xakameyso qalabka qalabka. taleefankaaga
Haddii aadan si farxad leh kugula yaabin badeecad si fiican wax u qabaneysay muddo yar, waxaad ku jirtaa daaweyn. Waxyaabahan oo dhan dib u eegis ayaa lagu oggolaaday oo lagu heli karaa dhoofinta laba maalmood oo bilaash ah oo ku saabsan Amazon.
Kaliya waxaan kugula talineynaa alaabooyinka aan jecel nahay oo aan u maleynayno inaad sidaas sameyn doontid. Waxaan ka heli karnaa qayb ka mid ah iibka alaabooyinka laga soo iibsaday qodobkaan, oo ay qorteen kooxdayada Ganacsiga.
Miyaad tegaysaa maalmo? Kaameeradan amniga guriga leh waxay lashaqeysaa barnaamij, sidaa darteed waxaad ku heli kartaa feed toos ah oo toos looguugu shubay taleefankaaga. Xitaa si ka sii fiican, waxaad u adeegsankartaa app-ka inaad kaamirada kaameeradda oo aad ka hesho aragtida qolka oo dhan. Duub 12-ilbiriqsi ayaa la duubayaa markasta oo dhaqdhaqaaq la ogaado, ka dibna lagu keydiyo daruuraha, markaa dib ayaad ufiirin kartaa mar dambe.
Gooya fiilada oo hel telefishankaaga adoo adeegsanaya Amazon Fire Stick, si aad kumanaan kun oo filim iyo barnaamijyo TV ah ugu shubi karto hal meel fog. Waxay la jaan qaadi kartaa dhammaan adeegyada qulqulka weyn iyo marin u helitaanka bandhigyada iyo filimada ku saabsan Amazon Prime gebi ahaanba waa lacag la’aan. Intaa waxaa dheer, iyada oo la adeegsanayo shaqada Alexa, waxaad isticmaali kartaa amarrada codka si aad u hesho waxa aad raadineyso.
Waxay ku habboon yihiin shimbiraha loogaarsado, ugaarsiga, iyo socodka, aaladaha noocan ah waxay bixiyaan 12x weyne xoog leh waxayna leeyihiin qalab yar oo iftiin yar leh, marka waad sii wadan kartaa isticmaalkooda marka qorraxdu sii dhacdo. Koobabka indhaha ee la isku hagaajin karo ayaa leh qof kasta oo xiran muraayadaha indhaha, iyo kuwa boodhadhka leh ee duuban ayaa yar yar, markaa waxaad ku dhex ridi kartaa baakadkaaga.
Waxyaabaha yaryar ayaa sameeya faraqyo waaweyn, sida silsiladaha fiilooyinka ee ka ilaaliya xadhkahaaga fiilooyinka inay si sax ah u dhacaan halka ugu badan ee ay u fooraraan. Xarkaha jilicsan ee jilicsan ayaa si dhib yar ugu dul fududaanaya waxayna ku habboon yihiin fiilooyinka badankooda, oo ay ku jiraan USB, micro-USB, iyo fiilooyinka hillaaca. Qayb kastaa waxay la timid siddeed ururo oo badan.
Haddii aad wax ka qabaneyso wicitaanada, qalalka, ama ciribta dillaacday, kareemkan cagaha culus ee culus ayaa ah waxaad ubaahantahay inaad ku soo celiso qaab ahaan. Waxaa loo qaabeyey qiyaaso aad u weyn oo ah allantoin - qoyaan gaar ah oo gasha lakabyada maqaarka ee daran si ay u gaarsiiso biyo baxa qoto dheer. Gasho tan sariirta kahor cagahaaguna waxay bilaabi doonaan inay isbedelaan maalmo gudahood.
Maalgashi weyn oo caafimaadkaaga ah, probiotic-kan ayaa ka kooban 12 nooc iyo qaaciddada-sii-deynta oo si tartiib tartiib ah dib ugu soo celisa dheelitirka calooshaada, ka shaqeynta taageeridda tallaal caafimaad iyo habdhiska dheef-shiidka, halka sidoo kale kor loogu qaado caafimaadka maskaxda iyo shucuurta (haa, qanjirkaagu waa kanaga labaad “maskaxda”). Waa vegan, kosher, non-GMO, waana bilaa xasaasiyado xasaasiyadeed sida qamadiga, gluten, iyo nuts.
Thanks to nadiifiyahan nadiifiyaha ah, majiraan wax istaagaya hareeraha yaabinta intee leeg caanobooraha aad si amaan ah ugu shubi karto saxanka. Waxay ku timaaddaa si ku-habboon oo loogu qiyaaso laba qaadasho oo way adag tahay in la timaha timaha, saabuun, warqad, iyo xirmooyinka dufanku. Ku isticmaal qubeyska ama musqusha iyo weelka jikada.
Maqaarka maqaarka ee magnesium waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee lagu beero faa'iidooyinka macdanta mucjisada ah ee lagu yaqaan inay dejiso murqaha xanuunka, yareeyso casiraad, ka hortag xanuunka dhanjafka, yareynta dareenka walaaca, iyo kor u qaadida hurdo habboon. Saliida magnesium-ka waxaa laga soo qaatay Badda Dhimatay, dadka dib u fiiriya Amazonna waxay ku dhaartaan natiijooyinka, iyadoo hal qoraal ah in ay "ka shaqeyso yaabab murqaha iyo xanuunka dareemayaasha."
Qofka ugu jecel A-listers ee had iyo jeer ku socda rooga gaduudan, Mario Badescu lotion qalajinta ayaa ah dariiqa nacfiga ah ee lagu joojiyo ciladaha markay kacaan. Caanaha loo yaqaan 'formula' ee caanka ah waxaa lagu sameeyay isku-darka macdanta yareynaysa zinc iyo saliil-cusbada, oo ay weheliso calamine si loo dajiyo casaanka iyo caabuqa. Gasho sariirta horteed, oo u kac tooso muuqaal cad.
Wixii hadhaaga ah ka dhig mid cusub sidii habeenki ugu horreeyay ee aad u kariyeyn lahayd dabooliyaasha keydsan ee cuntada ee ku fida weelka iyo weelasha. Waxaa laga sameeyay silicone-bilaashka ah ee BPA-da, waxay yihiin kuwo kuleylka u adkeysan kara oo makiinada weelka lagu qubeysto ku badbaado, xirmo walbana waxay la imaaneysaa toddobo dabool oo cabbir kala duwan leh.
Hadaadan waligaa isku dayin buste culeys ah kahor, waxaad dooneysaa inaad hore usii socoto oo riix “Add to Cart”. Miisaanku wuxuu ka caawiyaa kicinta wax soo saarka dopamine iyo serotonin, kuwaas oo kaa caawin kara yareynta welwelka, kor u qaadida hurdo-hurdo, iyo inaad si dhakhso leh uga booddo. Waxaa laga heli karaa miisaanno kaladuwan - dooro mid ka mid ah 12% culeyska jirkaaga.
Qalabkan xoqida leh ee labada lugood leh waxaa ku yaal buluug hal dhinac ah si loo buunbuuniyo loona gaabiyo maqaarka qallalan iyo sanka, iyo dhinaca kale waa saabuun iskudhafan oo lagu sameeyay qoyaan qoto dheer, alool shea, iyo fiitamiin E. U isticmaal tan si joogto ah cagaha u muuqda oo aad dareento mid deggan - oo aan qallaf ahayn.
Iyada oo ah ilaaliyaha mashiinka u qaabeeya qaab-sameeyaha, waxaad hubsan kartaa in timo aan hoos u dhici doonin oo ay sababi doonaan xirmooyin. Waxaa loogu talagalay in lagu habeeyo dhammaan bullaacadaha caadiga ah ee tuubbooyinka, waxay qabataa timo timo waxayna ku duubtaa agagaarka dhululubo, halka qulqulatooyinka oo dhan ay u oggolaadaan biyaha inay si xor ah u socdaan, marka ma joogsan doontid hal inji intaad shaambo leedahay.
Taageere aad loo jecel yahay oo kumanaan dib-u-eegis ah oo shan-xiddigle ah oo Amazon ah ah, ku hadla af-ka Bluetooth-ga ah ee la qaadan karo wuxuu si islaawe ah ugu xiraa aalad kasta wuxuuna bixiyaa codka istuudiyaha tayada leh ee istuudiyaha illaa 12 saacadood kaliya hal lacag ah. Waa biyo-xireen IPX7 ah, sidaa darteed waad ku raaxeysan kartaa muusikadaada agagaarka barkadda ama xeebta, iyo buuqa dhismayaasha buuq ka dhismay micnihiisu wuxuu macno weyn u yahay wicitaannada. Ka xulo sagaal midab.
Aad ayey ugu fiican tahay samaynta saxamada iyo nadiifinta qubista dharkan dib loo isticmaali karo waxaa laga sameeyay cellulose iyo cudbi aad u badan, iyo lix xirmooyin ayaa beddeli kara ilaa 90 duub oo warqad shukumaanno ah. Kaamil ah haddii aad u shaqeyneyso wadadaada qashinka qashinka ah, makiinadaha waa la nadiifin karaa oo ma xoqan doonaan dusha sare ee jilicsan mana ka tegi doonaan injirta.
Haddii aad wax ka qabato madax xanuun ama madax xanuunka dhanjafka ah, waad ogtahay sida ay carqalad u noqon karaan, laakiin aaladdaan acupressure-ka ah waxaa laga yaabaa inay ku siin karto xoogaa dejin dabiici ah. Adigoo istiraatiijiyad ku meelaynaya kilinka barta 'L14 acupressure dhibic' (inta udhaxeysa suulkaaga iyo fartaada), waxay kudhaceysaa cadaadiska daaweynta si loo yareeyo xanuunka halka sidoo kale isku dheelitirka tamarta iyo yareynta xiisadda.
Caaryada, caaryada, iyo iniin-dhogorta ayaa ah dhibaatooyinka caadiga ah ee guryaha da 'kasta ha lahaadeene, laakiin uumi-baxa qoyaanku waa xallin sahlan. Kaliya kor u qaad dusha sare isla markaana si toos ah ayey u soo jiidan doontaa una nuugaysaa qoyaanka xad-dhaafka ah, taasoo ka dhigaysa qol kasta oo jilicsan iyo qalajiye. Mid ka mid ah falanqeeyayaasha Amazon ayaa qoray, “Aad ayey u yareeyeen qoyaanka qoyaankayga musqusha, oo sidaas ayey ku qaadataa muddo dheer! Aad ugafiican dhammaan xalka kale ee aan isku daynay. Ka bax ur ur liin leh oo inbadan ina haysay muddo bilo ah. ”
Waa wax tijaabin ah inaad kaliya ku tuurto dhamaan wixii aad uhesho oo kudhacdid jirida gaarigaaga, kaliya inaad furto marka aad xamuul ka iibsato oo aad waji waji waji ah kala kulanto. Qabanqaabiyaha xardhan ayaa labalaabi doonaa isku dhacaas, iyada oo ay uga mahadcelinayaan labada qaybood ee waa weyn ee alaabooyinka waaweyn iyo jeebka mesh-ka dhinacyada iyo qalabyada. Waxaa intaa dheer, waxa oo dhan ayaa laalaabaa kolka ay habboon yihiin in la dhigo shandadaha qaarkood.
Ku nadiifi qalfoofka birta kabka leh iyo griddles-ka si ammaan ah adoo isticmaalaya burush bir-xoq leh. Xirmooyinka gaagaaban ee gaagaaban ayaa kufilan inay bixiyaan xoqitaan wanaagsan, halka qaybta angled ay kuu ogolaaneyso inaad gaarto geesaha isla markaana miirtu ay ka shaqeyso cuntooyinka ku dhegan. Waa hab wax ku ool ah oo lagu nadiifiyo iyada oo aan saabuun la helin, sidaa darteed digsigaagu wuxuu sii hayn karaa xawaaraha wanaagsan ee lagu kasbaday.
Xoog badan oo haysta illaa 15 rodol oo aan xirneyn, qabatooyinkan keydinta waxay ku habboon yihiin furayaasha laalaado, sawirro, tuwaallo iyo waxyaabo kaloo badan. Waxay ku dul fuulayaan meel kasta oo siman, oo ay ka mid yihiin taayirrada iyo muraayadaha indhaha, iyo maadaama ay hufan yihiin, gebi ahaanba lama arki karo. Iyaga oo gadaal ka soo laalanaya, waxay waliba si fudud u rakibayaan oo way fududahay in meesha laga saaro iyaga oo aan waxyeello u geysan dusha sare.
Taageere kale (ahem) oo ah kan ugu caansan, taageeran compact-kaan laakiin awooda badan wuxuu kasbaday 17,000 dib-u-eegis shanta-Amazon ah. Muuqaalka saddexda xawaaraha leh wuxuu wareegayaa hawo badan si uu u bixiyo nasasho qol kasta oo kulul, madaxuna wuxuu qaadaa 90 darajo, marka waxaad ujeedo u leedahay socodka hawada meel kasta oo aad rabto. Laakiin si ka duwan taageerayaasha kale ee awooda badan, tani waxay leedahay raad yar oo ku filan oo lagu fadhiisto miiskaaga ama miiska qaxwaha.
Haddii aad jeceshahay dhageysiga muusikada, medit-ka, ama podcast-ka inta aad hurdo u hurdo, maaskaro-ku-jiifka Bluetooth-kaani waa waxa aad ubaahantahay. Mashiinka mashiinka mashiinka xusuusta ayaa leh aaladda ku dhex hadasha Bluetooth, marka waad dhageysan kartaa liiskaaga markaad xayiraysid nalka isla waqtigaas. Intaa waxaa sii dheer, wajiga hore ee maaskarada ayaa leh isku dhafan mug iyo ciyaar xakameyn / joojiso hawlgal sahlan.
Waad ku mahadsan tahay sariir-maydhka cagaha maydhista, waxaad siin kartaa cago aad u mashquul badan intaad karsanayso. Sadarka waxaa ku yaal boqolaal silsilad jilicsan oo silig jilicsan dusha sare leh, oo ay weheliso koobabka miskaha jilicsan ee sagxadda hoose si ay si amaan ah ugu xafidaan dabaqa qubayska.
“Collagen” waa unug muhiim u ah dhismooyinka jirka oo aad u badan oo ay ku jiraan timaha, ciddiyaha, maqaarka, iyo kala-goysyada, budada 'collagen' waa hab fudud oo wax ku ool ah oo lagu helo waxbadan. Markay tahay 20 garaam oo kologen ah halkii qaadasho, waa dhadhan la'aan iyo nafaqo-la’aan, waxayna ku milmaysaa cabitaanno kulul ama qabow, sida kafee, biyo, smoothies, iyo cabitaannada borotiinka.
Waxaan ku tiirsanahay makiinadaha dharka dhaqno si aan dharkayaga u nadiifinno, laakiin - sidee bay u nadiifsan yihiin mashiinnada dharka lagu dhaqdo laftooda? (Muusiga maalinta qiyaamaha.) Kuxiro culeys ah mid ka mid ah kiniiniyada mashiinka dharka lagu dhaqo bishii mar si aad u nadiifiso hadhaaga iyo qoryaha oo aad u hubiso in dharkaaga nadiifka ah ee nadiifka ahi run ahaantii nadiif yahay.
Fadhiista dibedda gadaasheeda micnaheedu maahan inaad qarashgareeyso dhiqlaha galabnimada oo dhan - sudhan dabinada duulimaadka si aad u soo jiidato wixii cayayaanka dhibsado, si aad ugu raaxeysan karto bannaanka weyn. Waxaa loo maleynayaa in la qaban karo ilaa 20,000 oo cayayaanka, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameysaa waa inaad biyo ku dartaa santuuqa gudaha ku jira si aad u dajiso duqsiyada.
Ku bixinta wakhti badan oo dibadda ah waxay ka dhigan tahay qaniinyada kaneecada iyo quraacda oo wax u dhimaysa ciyaartaada qodaya, laakiin buufinkan xakamaynta cayayaanka waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo cayayaanka ilaa afar toddobaad, xitaa roobka kadib. Kaliya ku dheji tuubbooyinka caadiga ah ee jardiinada si aad si sahal ah ugu faafiso dushaada, oo waxay ku xirmi doontaa kaneecada, quraanjada, iyo boodada.
Haddii aad ka gaabinayso dekedaha USB, waad u adeegsan kartaa xaruntan USB-ga si ay kuu siiso meel ku xirnaan badan. Iyaga oo la jaan qaadaya labada hawlgal ee Windows iyo Mac, waxay leedahay afar dekedood oo shaqsi ahaan loo demi karo oo laga demi karo si ay si karti leh kor ugu qaaddo awoodda, iyo cufnaanta, cufnaanta kombiyuutarka kama qaadan doonto booska aan loo baahnayn miiskaaga.
Lagu sameeyay 100% silicone, xoqeyayaashani weelka maydhku si dhakhso ah ayey u qallalaan laf-dhabarka unugyada, taas oo micnaheedu yahay inaysan ku hayn jeermis ama ur. Waxay ku fiican yihiin inay ka saaraan xitaa kuwa ugu adkaanta badan ee qashin-qubka, isla markaana waxay u xoqi doonaan dhammaan qalabka wax lagu kariyo si badbaado leh oo aan waxyeelo lahayn. Baakad kasta waxay la imaanaysaa saddex xoq.
Ku tuur kubbadaha qallajiyaha leh ee dhogorta leh soo socota, oo waxay gacan ka geysan doonaan wareejinta hawo si dharka loo dhaqo si dhaqso leh loogu dhammeeyo (taas oo iyana, tan, ilaalin doonta tamarta oo yarayn doonta biilkaaga korantada). Waxay sidoo kale ka shaqeeyaan inay jilciyaan dharka isla markaana ka hortagaan burushyada, taas oo macnaheedu yahay inaadan u baahnayn inaad kaydiso xaashiyaha qalajiyaha marka xigta ee aad dukaanka aado.
Sanduuqa qalajinta saxan waxaa lagu ridi karaa barkaddaada, si ay biyuhu dhammaantood si toos ah ugu daadiyaan tuubbada, laakiin sidoo kale waa habka ugu fiican ee lagu mayrro miraha iyo khudaarta markii aadan qabin colander. Markaad dhammeysid isticmaalkeeda, si kufilan ayaa loogu duuduubaa kaydinta, sidaa darteed waxaad ku ridi kartaa santuuqa hoostiisa.
Haddii giraanta lacagiga ah ama silsiladdu ay waxyar ka sii xumaanayaan xirnaashaha, si dardar leh ayaad u soo noolayn kartaa adiga oo gacan ka helaya nadiifiyaha dahabka ah. Waxaa loogu talagalay qaanad gudaha ku dhisan, sidaa darteed waad kaga tagi kartaa gogo'gaaga qurxan ee xalka xalay, laakiin - qurxinta iyo biraha badan ee jilicsan - waxaad kaliya u baahan doontaa inaad si qunyar ah oo tartiib ah ugu xoqdo burush.
Dad aad u jecel Amazon, santuuqa acupressure-ku waa “sariir ciddiyaha” waxaad dhab ahaan dooneysaa inaad jiifto. Waxay kuxirantahay kumanaan acu-dhibco ah, oo markii aad ku jiifto, waxay ka shaqeyn doonaan inay kor u qaadaan wareegga dhiigga, yareeyaan walwalka, waxay taageeraan wareegga hurdada wanaagsan, iyo xanuunka yareynta. Mid ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa qoray, “Waxaan helay tan sababtoo ah waxaan lahaa qoorta iyo cidhiidhiga qoorta iyo dhabarka kore oo ma awoodo inaan duugista caadiga ah raaco. [...]. Daqiiqado kadib, waxay bilaabeen inay gubtaan, laakiin hab wanaagsan. Waxaan arkay aniga oo indhahayga xiraya oo nasanaya. Markii aan kacay, waxaan xaqiiqdii dareemi karay farqiga! ”
Waalidiinta xayawaanka jecel waxay jecel yihiin qalabkan gacanta lagu hago ee aadka loo qiimeeyay ee leh qaab khafiifa oo caag ah oo ka kaxeeya bisadda iyo timaha xayawaanka si fudud. Waxa kale oo ay u fiican tahay in lagu isticmaalo rooga, sagxadaha adag, iyo jaranjarooyinka, iyo xargaha xoogga leh ee 16-cagood ayaa ku siinaya dherer badan si aad u dhaqdhaqaaqdid.
Haa, waxaa jira hab dabiici ah oo looga baxo wasaqda dharka isla markaana usha dharka ka saaridda ayaa caddeynaysa. Lagu sameeyay maadooyin jilicsan sida saliida qumbaha la saarey iyo saliida liinta, way adagtahay in meesha laga saaro wax kasta oo khamri gaduud ah ilaa midabka cawska. Baarayaashana waxay ku dhaarteen natiijada - mid ayaa qoray, "Waxaa la keydiyay dhar aad u badan oo qashinka ku jiray."
Xakamee sameeyahaaga qaxwaha, fan, ama nalka qolka fadhiga meel kasta oo dunida ah oo ku xir xirmooyinkan xariifka ah ee u eg barnaamij bilaash ah taleefankaaga. Xitaa si ka sii fiican, waad u adeegsan kartaa jadwal loogu talagalay qalabkaas, markaa uma baahnid inaad xasuusnaato inaad damiso nalalka markaad guriga ka baxeyso. Oo ka fiican (wali mar labaad), waxaad u adeegsan kartaa Alexa ama Google Home inaad codkaaga xakamayso midkasta.
Naftaada u raalli noqo oo soo iibso fiilooyinkan dheeraadka ah ee weligood sii raagaya oo raagaya oo laga sameeyay naadiga culus ee culus. Waxaa intaa dheer, dherer 10 cagood, ma u baahan doontid inaad si toos ah uga kacdid gidaarka marka xigta ee aad u baahan tahay inaad soo wacdo inta taleefankaagu dallacayo. Baakad kasta waxay la timaaddaa saddex.
Marka ay timaado dayactirka heerkulka cabitaanka, dhalada biya-xireenkan birta ah ayaa ka fiican tan ugu fiican. Saddex-geesood leh oo leh meel maran, waxaay cabitaannada qabow ku qaboojiyaa illaa 41 saacadood iyo cabbitaannada kulul ee kulul illaa 18. Waxaa sii dheer, lakabka naxaasku wuxuu ka hortagaa uumiga. Waxaa lagu heli karaa saddex cabbir iyo 16 midab, sida onyx, buluug buluug ah, iyo teakwood halkan lagu sawiray.
Waxaa jira hab wanaagsan oo lagu cabbo is biirsaday, waxayna la xiriirtaa wasakhooyinka baraf-samaynta ee sameeya dhudhuno dheraad dheeri ah iyo isjiidjiid. Waxay ka dhalaalayaan si ka dhakhso badan xabadaha cabbirkoodu caadi yahay, taas oo macnaheedu yahay in cabitaannadaadu ay sii qaboobayaan laakiin ha ku dareemin. Oo waxay ka samaysan yihiin silicone dabacsan, kaas oo fududaynaya in la soo saaro xabadaha hal mar markiiba.
Dhabarkaaga ka dhig mid faraxsan - xiitaa markaad saacado aad miiska joogtid waqti dheer - barkimadan xaashida lumbar. Waxay ka sameysan tahay xumbo jilicsan oo taageero leh, waxay taageertaa isku haynta laf-dhabarka saxda ah si looga hortago xannuunka iyo murqaha oo adkaada, iyo labada xargaha laastikada ah ee ku dhegan kursigaaga si si ammaan ah loogu meeleeyo. “Difaacay dhabarkayga,” ayuu qoray mid ka mid ah falanqeeyayaasha.
Waqtiga boostada: Jul-22-2020